सुन्दर संसार देख्दै गरेका युनिक तामाङले यसरि सडकमै गुमाए ज्यान ! – Etajakhabar
सुन्दर संसार देख्दै गरेका युनिक तामाङले यसरि सडकमै गुमाए ज्यान !
नुवाकोटको बट्टार बजारमा बसले कि च्दा एक बालकको निधन भएको छ । तारकेश्वर गाउँपालिका–६ गोस्र्याङ घर भएका प्रताप तामाङका ६ वर्षीय छोरा युनिक तामाङको हिजो दिउँसो केरुङ यातायातको बा ४ ख ७५०४ नम्बरको बसले कि च्दा ज्या न गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बालकको घटनास्थलमै ज्या न गएपछि आ क्रोशित स्थानीयले चालकलाई सख्त घाइते हुने गरी कु टेका छन् भने बस तो’डफो’ड भएको छ । घाइते चालकको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ । मृ तकका आफन्तले बसलाई जलाउने प्रयास गरेपछि भीड तितरवितर पार्न प्रहरीले पाँच सेल अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो । मृ तकका आफन्तले दोषीलाई कडा करवाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरेर बट्टार बजार बन्द गरेका छन् ।
सवारी दुर्घटनामा एकको निधन
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका तिनकुनेस्थित कोशी राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा एकको निधन भएको छ । निधन हुनेमा इटहरी उपमहानगरपालिका १९ का ६१ वर्षीया कालीमाया राई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।
इटहरीबाट धरानतर्फ जाँदै गरेको को २१ प २३६१ नम्बरको स्कुटरलाई सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको को १ ख १९३० नम्बरको बसले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा स्कुटर पछाडि सवार राईको घटनास्थलमै निधन भएको सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद शर्माले जानकारी दिनुभयो । स्कुटर चालक उहाँको श्रीमान् जयबहादुर राई सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । स्कुटी, बस र बस चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ” जनावरले बढ्दै सवारी दुर्घटना
अमलेखगञ्जदेखि चपुरसम्मको ५१ किलोमिटरमध्ये ४७ किलोमिटर सडक जङ्गल क्षेत्र रहेको छ । जङ्गलमा कन्दमूल र फलफूल पाइने भएपनि विभिन्न सवारी साधनमा यात्रारत् यात्रुले विभिन्न खाने कुरा दिने गरेका कारण जङ्गली जनावर सडकको छेउछाउमा आउने गरेका छन् । ठूलो जङ्गल भएका कारणपनि एक भागबाट अर्काे भागमा वारपार गर्ने गर्दछन् । त्यहाँको ४७ किलोमिटर मध्ये चार किलोमिटर एकतर्फी र बाँकी ४३ किलो मिटर दुवैतर्फ जङ्गल छ ।
Posted on: Thursday, October 17, 2019 Time: 9:00:10
-10316 second ago
-8452 second ago
-7636 second ago
-6546 second ago
-1398 second ago
-129 second ago